Swagat Nepal:: वरिष्ठ पत्रकारै भन्छन् स्त्रीहरु पनि पुरुषको बासी अँगालोमा मात्र सुखी रहन सक्दैनन्
वरिष्ठ पत्रकारै भन्छन् स्त्रीहरु पनि पुरुषको बासी अँगालोमा मात्र सुखी रहन सक्दैनन्
वरिष्ठ पत्रकार तथा साहित्यकार अनि घाइते बनायौ मलाई मायालु तरबारले लगायत गीतका गायक रचनाकार संगीतकार कुुसुम भट्टराईले खुलेर यौन स्वतन्त्रताको लागि डिभोर्सको पक्षमा आफ्ना अभिव्यक्ति दिएका छन् ।
पछिल्लो समय घोष्ट राइटिंग नेपालका लागि छायाँ लेखनमा समय दिइरहेका भट्टराईले विवाह संस्थामाथि नै पनि दार्शनिक प्रश्न समेत उठाएका छन् ।
भट्टराईले आफ्नो आधिकारिक फेसबुकमा लामो लेख सरहको स्ट्याटस लेख्दै भनेका छन् आत्मिक यौन स्वतन्त्रतालाई समाजले व्यभिचार बुझ्नु नै गलत हो ।
उनको भनाइ जस्ताको तस्तै :
मसँग कोही सहमत हुनेछैनन्, तैपनि भन्छु
अचेल मेरा धेरै पत्रकार र कलाकार मित्रहरु छन्, जो धमाधम डिभोर्स गरिरहेका छन् । अस्ती कुन चाँहि कलाकार मित्रको डिभोर्स भो रे भन्ने सुनें । झन अस्ती एकजना पत्रकार साथीको डिभोर्स भो रे । झन अस्ती एकजना व्यापारीको डिभोर्स भो रे ।
यस्तो किन भइरहेको छ ? भनेर गम्दा मलाई लाग्यो, सम्बन्ध भनेको बोझ हुनुहुन्न, सँगै बसेरभन्दा यदि अलग भएर जिवन सहज हुन्छ भने अलग हुनु नै राम्रो हो ।
मलाई कहिलेकाँही लाग्छ, यो ‘विवाह’ भन्ने जुन सँस्था छ, यसको परम्परागत मान्यता र सँस्कार नै गलत छ ।
एक पुरुष र एक महिलामा मात्र सिमित जोडीको जृुन परम्परागत मान्यता छ, त्यसमै खोट छ । जैविक स्वभावसँग त्यसको कुनै तादात्म्य नै छैन । कुनै पनि पुरुष फगत एक स्त्रीबाट मात्र सन्तुष्ट रहन सक्दैन । अनि स्त्रीहरु पनि पुरुषको बासी अँगालोमा मात्र सुखी रहन सक्दैनन् । दुबैलाई टेस्ट फेरिरहन मन लाग्छ । यो जैविक स्वभाव हो । तर, हाम्रो मुल्य, मान्यता र सँस्कारले यसलाई ‘व्यभिचार’ भनिदिन्छ । अनि त्यसपछि बन्धन र सँकुचन सुरुहुन्छ । अनि सुरु हुन्छ, गृह कलह । यौनमै समस्या आएपछि सम्बन्धका अन्य आयामहरुमा पनि समस्या देखिदै जान्छन् ।
यो यौनको विषय आपसी सन्तुष्टीमा मात्र निहित छैन ।
आफ्नो साथी (पुरुष या महिला) अरु कसैसँग सम्बन्ध बनाउन थाल्यो भने पनि त्यसले आपसमा इश्र्या जन्माउन थाल्छ । यो झन खतरनाक हुन्छ । दुबै इमानदार छन् भने पनि शँकाकै भरमा यौन इश्र्या बढदै जान्छ र ओथेलो सिन्ड्रोम (सेक्सपियरको ओथेलो नाटकमा आफ्नी प्रेमिका अरु कसैसँग सल्केको शँकाकै भरमा इश्र्यालु पुरुषले प्रेमिकाको हत्या नै गरिदिन्छ) देखा पर्नसक्छ ।
यौन सन्तुलनको अभावमा दाम्पत्य जिवनमा दरार आउन थाल्छ । प्रेम र विश्वासको कमी हुन थाल्छ र त्यो डिभोर्ससम्म पुग्नसक्छ । अथवा, अरु कुनै कारणबाट सुरु भएको खटपटले अन्ततः यौन सम्बन्धमा असर पार्छ र त्यसपछि सम्बन्ध झन खराब हुन्छ ।
यसकारण यो कुनै एक जोडी या परिवारको मात्र समस्या हैन । अहिलेको समग्र मानव समाजमा दाम्पत्य जिवन बास्तवमा बोझ हो कि बरदान हो ? भन्ने अन्यौल कायमै छ । यो विस्तारै बोझ बन्दै गएको छ ।
मानिसहरुवीचको सम्बन्ध, त्यसमा पनि महिला र पुरुषवीचको सम्बन्धलाई प्रेममय बनाउने पद्धती भनेको स्वच्छन्द जीवन नै हो । विवाहीत स्त्री र पुरुषले एक अर्कालाई स्वतन्त्र छाडिदिने, एकले अर्कालाई सम्पत्ति नठान्ने, दुबैको गोपनियताको सम्मान गर्ने, पती र पत्नीवीच केही विषयमा दुरी पनि कायम हुने हो भने सम्बन्ध अली उन्नत हुन्थ्यो कि ? यसका लागि सोचमै बदलाव ल्याउनुपर्छ ।
कुनै पुरुषले बाहीर कुनै अर्की स्त्रीसँग सहमतीमै सम्बन्ध गाँस्यो भने त्यसलाई घरका श्रीमतीले इश्यु नबनाउने, श्रीमतीले पनि कुनै पर पुरुषसँग त्यसखालको रिलेशन गाँसीन भने पतीले झगडा नगर्ने, समझदारीमा दुबै कसरी हुन्छ खुशी हुने उपाय अपनाउन हामीलाई हाम्रो परम्परागत मुल्य र मान्यताले पटक्कै दिदैन । तर, यसो नगरेसम्म अब यो विवाह भन्ने सँस्थाको चार्मिङ या महत्ता म देख्दिन ।
खुलेरै भन्ने हो भने जो जसरी खुशी रहनसक्छ, खुशी हुने समझदारी बनाउनुपर्छजस्तो मलाई लाग्छ । सरकारले पनि कानूनी मान्यता दिएर शहरमा रसीक सेन्टरहरु खोल्ने अनुमती देओस् । यौन सुखबाट कुन्ठीत मानिस अर्की श्रीमती नै ल्याउनेतीर नलागी केही क्षण त्यतै भुलोस् र यौनको भडाँस सकिएपछि लुरुक्क घरमा श्रीमतीकै काखमा फर्कियोस् । मेनेज गरे के हुन्न ?
मैले भन्न खोजेको के भने, अब हामी अली उदार र खुला हुने बेला आयो । यो दाम्पत्यको साँघुरो गल्लीले स्वच्छन्दताको अक्सीजन खोजेको धेरै भो ।